Wardegdega:Diyaarada Drone oo dishay Sahal Isku dhuuq iyo Ibrahim Anta-Godane oo dhaawac liita ah « AYAAMO TV
Wardegdega:Diyaarada Drone oo dishay Sahal Isku dhuuq iyo Ibrahim Anta-Godane oo dhaawac liita ah
1732 Views Date January 26th, 2014 time 8:35 pm
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in galabta Diyaarad Nuuca aan Duuliyaha laheyn duqeyn culus ku weerartay gaari ay wateen Saraakiil iyo Ciidamo katirsan Al-Shabaab oo kusugan Gobolka Sh/Hoose.
Sida lagu helayo Warar hordhac ah oo soo baxaya Diyaarad Nuuca aan Duuliyaha laheyn ayaa gantaal la dhacday gaaari ay wateen Xubno katirsan Al-Shabaab oo tiradooda magacyadooda aan si rasmi ah loo helin .
Wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in Sarkaal ka tirsan al-Shabaab uu u xaqiijiyey in weerarka uu ku dhintay Sarkaalka la beegsaday Duqeynta oo lagu Magacaabo Sahal Isku dhuuq kuna magac dheera Camuu.
Duqeynta ayaa ka dhacday inta u dhaxeysa Deegaanka Sablaale iyo Degmada Baraawe , Wararka soo baxaya ayaana sheegaya in ay jiraan qasaarooyin kale oo duqeyntaasi ka dhashay inkastoo aan wali si rasmi ah loo heyn.
Dad kusugan Deegaanka Duqeynta lagula eegtay Gawaarida ay wateen Saraakiisha iyo Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa ku waramay in gaariga lala eegtay Duqeynta ay ahaayeen kuwa Miyaarado madow aan la ogaan karin cida saarneed.
Ma jiro ilaa hada wax war ah oo asoo baxay Xarakada Al-Shabaab oo ku aadan Duqeynta Galabta ka dhacday Gobolka Sh/Hoose , waxaa sidoo kale wali war kasoo baxin Dowlada Mareykanka oo iyadu lagu tuhmayo in Duqeyntaasi ka dambeysay.